“प्रभु बैंक डिबेञ्चर–२०८४” को विक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट
प्रभु बैंकले रु. एक अंकित दरको ८ वर्षको भुक्तानी अवधिका लागि जारी गर्न लागेको “प्रभु बैंक डिबेञ्चर–२०८४” निष्काशन गर्नको लागि नविल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लि. लाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रुपमा नियुक्त गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतामा प्रभु बैंक लि. का तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन र नबिल ईन्भेष्टेमेण्ट बैंकिङ्ग लि. का तर्पmबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिर बादे श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकले वार्षिक १० प्रतिशतका दरले प्रत्येक तीनतीन महिनामा ब्याज भुक्तानी हुने गरी रु. २ अर्ब बराबरको “प्रभु बैंक डिबेञ्चर–२०८४” नामक ऋणपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्न लागेको छ । १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र व्यक्तिगत तवरबाट र ८० करोड बराबरको ऋणपत्र सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्न लागेको हो । “प्रभु बैंक डिबेञ्चर–२०८४” को ट्रष्टीको रुपमा पनि नबिल ईन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ्ग लि. लाई नै नियुक्त गरिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भए पश्चात् “प्रभु बैंक डिबेञ्चर–२०८४” सार्वजनिक निष्काशन गरिने जनाइएको छ ।
यस अघि प्रभुले निष्काशन गरेको रु. एक हजार अंकित दरको १० वर्षको भुक्तानी अवधि भएको वार्षिक १०.२५ प्रतिशतका दरले अर्धवार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी हुने गरी निष्काशन गरेको रु. १ अर्ब बराबरको “१०.२५५ प्रभु बैंक डिबेञ्चर–२०८६” ऋणपत्र माग गरेको भन्दा बढि मात्रमा खरिदका लागि आवेदन परे पछि विक्री अवधि समाप्त हुनु अगावै बन्द भएको थियो ।